Matongerwo eNyika, 03 Nyamavhuvhu 2018
Chishanu 3 Nyamavhuvhu 2018
Nyamavhuvhu 03, 2018
Seneta Jeff Flake Voshuvira Zimbabwe reMangwana Rakajeka
“Apo ndaishanyira nzvimbo dzakawanda dzaivhoterwa munyika yose kumaruwa emuZimbabwe, ndakaona zvizvarwa zveZimbabwe, vechidiki nevakwegura vachifamba mitunhu yakawanda vachienda kunovhota", vanodaro Seneta Flake.
ZCC Yokurudzira VaMnangagwa Kuti Vashande naVaChamisa
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC , Reverend Kenneth Mtata, vati semakereke vari kukurudzira VaMnangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance.
VaMnangagwa Vanoti Vanotambira Kusarudzwa Kwavo seMutungamiri weNyika
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati vakatambira zvakataurwa neZimbabwe Electoral Commission, Zec, zvekuti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, Vanoti Ndivo Vakakunda Musarudzo yeMutungamiri weNyika
VaChamisa vati havasi kutambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission, nekuti vanozviziva kuti ndivo vakakunda.
VaMnangagwa Vanokunda Musarudzo yeMutungamiri weNyika
Mutungamiriri weZanu PF VaEmmerson Mnangagwa vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekuwana mavhoti 2,460 463, kana kuti 50.8% vachiteverwa naVaNelson Chamisa veMDC Alliance, avo vawana mavhoti 2,147 436 kana kuti 44.3% musarudzo dzakaitwa nemusi weMuvhuro.
Dzimwe Nyanzvi dzeMatongerwo eNyika Dzoshora Mafambisirwo Akaitwa Sarudzo
Zimbabwe Electoral Commission yakati mutungamiri weZanu-PF uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, Vanokunda Musarudzo yeMutungamiri weNyika
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission, Amai Priscilla Chigumba, vanoti mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, zvichitevera kuwana kwavaita mavhoti 2,460,463.
Nyamavhuvhu 02, 2018
VaMnangagwa Votungamira Zvisina Mutsindo Musarudzo yeMutungamiri weNyika
VaMnangagwa vava nemavhoti 2,147,505 - ukuwo VaChamisa vaine mavhoti 1, 929,704.
VaChamisa Vanoshanyira Vakakuvadzwa Mumhirizhonga Yakaitika muHarare neChitatu
VaChamisa vashora kupfurwa kwakaitwa varatidziri nemasoja zvakasiya zvaita kuti pafe vanhu vatanhatu nekukuvara vanhu vakawanda.
Nyamavhuvhu 01, 2018
Zanu-PF Yopemberera Kukunda kuMasvingo
Zanu –PF inoti icharamba ichitonga dunhu reMasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti Zanu PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo.
Zanu PF Inokunda Zvine Mutsindo Musarudzo?
MDC Alliance iri kupikisa zvabuda musarudzo idzi uye vatsigiri vayo varatidzira mumigwagwa izvo zvasiya vanhu vatatu vaurayiwa nemapurisa nemauto, mushure mekupfurwa.
Vaongorori veSarudzo Vopesana paNyaya yeZimbabwe
Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi weMuvhuro.